Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vaparura gwaro rinoratidza gwara rehurumende rekutengesa kunze kwenyika zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe.
VaMnangagwa vati mabhizimisi anoda kusima mari munyika dzine runyararo vakati Zimbabwe ine rombo rakanaka kuti inyika ine runyararo uye ine vanhu vanoshanda nesimba.
Vati mamiriro ezvehupfumi munyika ari kuvhiringwa nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uye zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika.
Vakudzira vanhu vose munyika kuti vashande pamwe chete kuitira kuti vemaindasitiri vakwanise kugadzira nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kunze kwenyika.
Vati chinangwa chehurumende ndechekuti panosvika gore ra2023 nyika ive yave kutengesa kunze kwenyika zvinhu zvinosvika mabhiriyoni manomwe emadhora, uye panosvika gore ra2030 ive yave kutengesa zvinhu zvinosvika mabhiriyoni gumi nemana.
VaMnangagwa vakurudzira vemaindasitiri nemakambani kuti vatengese kunze kwenyika zvikamu makumi maviri kubva muzana zvezvinhu zvavanogadzira, vakatiwo hurumende yavo inokoshesa kutsigira nyaya yekurima nekuti maindasitiri akawanda anogadzira zvinhu kubva muzvirimwa.
"Maindasitiri edu anoshanda zvikuru nezvinhu zvinobva mumabasa ekurima. Saka nekudaro zvakakosha zvikuru kuti hurumende itsigire mabasa ezvekurima, kuitira kuita kuti mabasa aya aiitwe nenzira dzechizvino-zvino izvo zvichaita kuti maindasitiri anoshanda nezvirimwa akure," vadaro VaMnangagwa.
VaMnangagwa vatsinhira nyaya yekuti vemaindasitiri nevemabhizimisi vatevedzere mutemo unosungira kuti vatengese zvinhu zvavo nemari yemuno.
"Zvichienderana nemitemo yenyika yedu, makambani ose anosungirwa kuti ashandise mari yemuno munyika pane zvose zvavanotenga kana kutengesa muno," vadaro VaMnangagwa.
Mumwe muzvinabhizimisi, VaBenson Ntini, vati makambani ehurumende akadai seZimbabwe Electricity Supply Authority anokanganisa mashandiro emakambani nekusaita mabasa awo nemazvo.
Vati pane nyaya dziri kuwanda dzekuti pane matransformer anoendeswa kunogadzirwa kuZesa, asi haadzoswe.
Mutungamiri wesangano reAffirmative Action Group, VaReginald Shoko, avo vanoongorora zvehupfumi vakazvimirira, vati chinangwa chehurumende chekuti zvinotengeswa kunze kwenyika zviwedzerwe chinogona kubudirira, asi nyaya yehuwori inofanirwa kugadziriswa.
Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvinokosha mabhiriyoni mana emadhora ekuAmerica mugore ra2018 uye izvi zvairatidza kukwira kwezvakatengeswa izvi nezvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana pane zvakatengeswa mugore ra2017.
Musangano wakadai unoitwa kamwe chete pagore uchikokerwa nekambani yehurumende, yeZimTrade, uye unopindwa nemakambani anogadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvinotengeswa kunze kwenyika.